Umlando yokutholakala ikhabethe iqala nge Napoleon. Lokhu umholi omkhulu walithanda oda, ngakho wayala ukuba izikhulu ukugqoka kwaba Ekhabetheni ngemuva kwesikrini. Kamuva, amaMelika efakwe esikhundleni ngomnyango screen enamasondo. Yena ngcono ngokuhamba kwesikhathi futhi roller indlela, kodwa ethandwa kakhulu amakhabethe waqala ukusebenzisa emva 2000. Futhi manje wezigqoko kuyinto isici imfashini kakhulu kwanoma iyiphi efulethini.
Ishadi Lezingubo Engingazigqoka ungaba kokubili beya futhi alo iminyango, a imfanelo esiyisibopho okuyizinto amasondo. Zama ukubhuka ikhabethe ngokuhambisa nge izinga nokufakwa, kungcono engabizi, kodwa kuyokusiza ukuba usebenzise ikhabethe iminyaka eminingi ezayo. Zokugqoka zakhelwe, ezezindlu kanye engaba. izingubo zokugqoka esakhelwe ngaphakathi ukuvumela inzuzo kakhulu ukwaba isikhala egumbini futhi akudingeki izingxenye ezisele (ohlangothini izindonga, phansi noma ophahleni). Ngaphezu kwalokho, esakhelwe ikhabethe ngezicabha sesibuko ukusiza ukufihla umnyango kwelinye igumbi noma sigqoka Igumbi, okuyilona elisebenzayo futhi umklamo Yiqiniso yesimanje. Kodwa ikhabethe amabutho ushibhile, futhi ngasiphi isikhathi wathutha kalula bengonozulane. Ububanzi izingubo zokugqoka - original nonstandard futhi uhlobo iKhabhinethi, okungathatha ngesimo embuthanweni, okusaqanda, noma azilingani kube convex. Ungakwazi oda udaba gumbi anoma yiluphi uhlobo ngokuvumelana nezifiso zakho futhi isici ekhaya.
Zokugqoka ukufihla ahlukahlukene amaphutha amafulethi yobukhulu encane ukuba Uphahla lwangaphakathi eliphezulu. iminyango-Mirrored isidingo ukufaka izibuko ehlukile, umdwebo olula noma ubuciko imidwebo ukunikeza egumbini ukukhanya kanye Airy. Ikhabethe ephasishi ngeke ngokucophelela "fihla" lonke izingubo engenhla nezicathulo raznosezonnuyu ekamelweni - ukudala Ukuvumelana ubuthongo umsindo ehhovisi - ukuzifaka esikhundleni umtapo ukuze silondoloze izincwadi futhi imibhalo. Noma yimuphi inkampani ifenisha ngeke akhiqize amakhabethe Coupe engabizi kakhulu oda ubukhulu ngqo ekhaya lakho ngesikhathi lemfisha.
Indlela ugcwalise lezingubo elikhulu kangaka? Uma wenza lezingubo iphrojekthi yakho, uzokwazi ukuba zifinyelele emashalofini, iziphanyeko nobhasikidi ukwakha. Uma nguwe ziyashintsha ngokuhamba kwesikhathi, sizokwazi ukufaka esikhundleni emashalofini ubudala futhi emathileyi ngaphandle kwezinkinga.
Ikhabethe kungekho minuses, inkinga nje ukuthi kule divayisi ngokwayo amafulethi. Semfene Uphahla lwangaphakathi, izindonga naphansi efulethini noma ukufakwa engafanele iKhabhinethi ngokushesha ukuhoxisa roller mshini wezenzo.
Ishadi Lezingubo Engingazigqoka - a godsend ngokuba efulethini yomuntu yesimanje, kusukela ligcwaliswe kahle, kungaba esikhundleni sigqoka Igumbi, ithala futhi semfenisha izincwadi, kanjalo enze umsebenzi amakhabethe ezimbili noma ezintathu.
Njengamanje, kunezindlela eziningi ukuklama umnyango panel. Lokhu ingilazi Frosted nge ukukhanyisa, isibuko panel amaphathini ahlukene, ingilazi ibala umnyango panel noma tapestries kanye nendwangu. Kabanzi nesakhiwo design. Ekhethiwe iphethini, sibalo noma isithombe idluliselwe iphaneli umnyango. Futhi ngokuvamile sisetshenziswa yasezindongeni zokuhlobisa kanye art ingilazi ezihlukile. Umkhuba nokusebenzisa Indwangu imidwebo ehambelana lodonga. Ungakwazi sifinyelele ngisho lo mphumela, ukuthi iKhabhinethi uyohlangana odongeni.
Okokuqala, lapho ekhetha ikhabethe, cabanga induduzo design imibono kanye nezifiso eza ngifuna wena uzokwenza ikhabethe lakho zungeza isici wezangaphakathi.
Manje ngokunqoba zokugqoka sizungeze izwe. Bona ngokuphelele ukwazi ukuthi ukubala amavidyo square ukwandisa efulethini yakho futhi udale umuzwa ukuze ekahle.
Kungani mobile ngodonga ehhovisi? Indlela ukukhweza ngodonga ephathekayo in the efulethini?
Breed yamakati amakhulu. Amagama nezithombe yamadwala yamakati amakhulu
'Zebra': ikhekhe ezimthende